समाचार Archives - TajaKhabarTV
२०७९, १७ असार शुक्रबार १४:२२ July 1, 2022 ताजा खबरसमाचार
काठमाडौं : रेस्लर अस्मिता जुरेलीले प्रहरीमा युवासंघका केन्द्रीय सदस्यविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिएकी छन् । ललितपुरको फर्सिडोलमा धान रोप्ने कार्यक्रममा आफूमाथि दुर्व्यवहार भएको भन्दै जुरेलीले प्रहरीमा जाहेरी दिएकीयुवासंघका केन्द्रीय सदस्य हिकमत बोहरा उर्फ हिलारीले आफूलाई असार १५ मा दुव्र्यवहार गरेको जुरेलीको…
२०७९, १६ असार बिहीबार १३:४० June 30, 2022 ताजा खबरसमाचार
काठमाडौं : गत असार ७ गते घोषणा गरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनाव चिन्ह घण्टी नपाउने सम्भावना बढेको छ । पार्टीको नाम नै फेर्न दवाव झेलिरहेका लामिछानेले रोजेको घण्टी चिन्ह यसअघि नै दर्ता भएको पाइएको छ । उनले रोजेको चिन्ह घण्टी…
२०७९, ११ असार शनिबार १४:३६ June 25, 2022 ताजा खबरसमाचार
काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्डले देशलाई नयाँ युगतिर लैजाने सपना रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल पर्वतारोहण संघले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले फेरि एक पटक प्रधानमन्त्री भएर देशलाई नयाँ युगतिर…
२०७९, ११ असार शनिबार १३:२८ June 25, 2022 ताजा खबरसमाचार
काठमाडौं : सरकारले पेट्रोलको २० र डिजेलको २८ रुपैयाँ मूल्य घटाउने घोषणा गरेको छ । शनिबार अयोजित आकस्मिक पत्रकार सम्मेलनमा उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले मूल्य घटाउने घोषणा गरेका हुन् । उनका अनुसार सरकारको निर्णयसँगै पेट्रोलको मूल्य…
प्रचण्डकी नातिनी सृष्टीको आक्रोश- प्रचण्डको परिवार भन्दैमा राजनीतिमा आउनै नपाउने ?
२०७९, ९ असार बिहीबार १०:३१ June 23, 2022 ताजा खबरसमाचार
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी नातिनी सृष्टि दाहाल केसीले प्रचण्डकै परिवारको सदस्य भएकाले आफूमाथि प्रश्न उठाएकोमा आपत्ति जनाएकी छन् । उनी प्रचण्डकी जेठी छोरी ज्ञानु दाहाल केसीकी छोरी हुन् । ज्ञानुको क्यान्सरका कारण पहिल्यै निधन भइसकेको…
सत्ता गठबन्धनको बैठक दिउँसो ३ बजे बस्दै, मन्त्री हेरफेर हुनसक्ने !
२०७९, ८ असार बुधबार १३:१३ June 22, 2022 ताजा खबरसमाचार
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बुधबार दिउँसो सत्ता गठबन्धनको बैठक बोलाएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले बालुवाटारमा दिउँसो ३ बजे गठबन्धनको बैठक बोलाएका हुन् । बैठकमा सरकारमा सहभागी कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाका शीर्ष नेता…
रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता नगर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी
२०७९, ८ असार बुधबार १३:०६ June 22, 2022 ताजा खबरसमाचार
काठमान्डौं । रवि लामिछानेले मंगलबार घोषणा गरेको ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’ विरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ । स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियानले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएको हो । ‘स्वतन्त्र’ उम्मेदवारलाई नै भ्रम पर्ने गरी नाम राखिएको भन्दै त्यो नाममा पार्टी दर्ता नगर्न…
रवि लामिछाने काठमाडौंबाट चुनाव लड्दै, आजै ग्यालेक्सी टिभीबाट बिदा भए
२०७९, २ असार बिहीबार १४:१० June 16, 2022 ताजा खबरसमाचार
काठमाडौं । लोकप्रिय सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने आगामी संसदीय चुनावमा काठमाडौंबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्ने भएका छन् । उनी आजै ग्यालेक्सी टेलिभिजनबाट बिदा भए । लामिछानेले काठमाडौंको कुन निर्वाचन क्षेत्रबाट लड्ने भन्ने चाहिँ अन्तिम टुंगो लागिसकेको छैन । तर, उनले ३ नम्बर…
माइला विकलाई हेलिकोप्टरबाट उद्धार हुदै !
२०७९, २८ जेष्ठ शनिबार १८:५२ June 11, 2022 ताजा खबरसमाचार
काठमाडौँ । नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाको एक विद्युत पोलमा चढेका ४४ वर्षका माइला विक ६को घण्टापछि हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरिएको छ । मानसिक सन्तुलन ठिक नभएका माइला बिहान करिब ११ बजेतिर स्थानीयले विक बिजुलीको पोलमा चढेको जानकारी पाएका थिए । उनी…
वडा नम्बर १६ का अध्यक्ष मुकुन्द रिजालको घरमा बालेनको लन्च मिटिङ
२०७९, २८ जेष्ठ शनिबार १४:१७ June 11, 2022 ताजा खबरसमाचार
काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले महानगरको काम कारबाहीलाई सहज बनाउने उद्देश्यका साथ वडा अध्यक्षहरूसँगको छलफल थालेका छन् । सोहि क्रममा शनिवार शाहले वडा नम्बर १६ का अध्यक्ष मुकुन्द रिजाललाई भेटेका छन् । रिजालकै घर बालाजुमा भेट्न पुगेका शाहले…